O adabara maka ịgbado ọkụ nke ikuku carbon dị ala dị ka paịpụ, ụgbọ mmiri na mmiri na wdg.
E6011 bụ electrode na-arụ ọrụ nke cellulosic. Nwere ike ịgbado ọkụ maka ọnọdụ niile (ọkachasị ọnọdụ kwụ ọtọ) yana AC na DC +. Ọ nwere magburu onwe ịgbado ọkụ arụmọrụ dị ka anụ aak, obere spatter, mfe slag mwepụ na achị achị-ike wdg Ọzọkwa o nwere uru nke mma wụrụ awụ ọdọ mmiri akara, ike aak ike na miri penetration na vetikal-ala ọnọdụ.
1. Ke ofụri ofụri, adịghị mkpa re-ọkpọọ electrode tupu ịgbado ọkụ. Mgbe mmiri mmiri na-emetụta ya, ekwesịrị ịmegharị ya na 70 ℃ -90 ℃ maka elekere 1.
2. A ga-ewepu nchara, mmanụ, mmiri na adịghị ọcha ndị ọzọ nke mpaghara weld tupu ịgbado ọkụ.
Ekwe IkeRel / RpUgboro abụọ MPa
Nke gara aga: E71T-GS- gbanyụọ ọkụ ịgbado ọkụ waya
Osote: Z408 Nickel Pipe Nkedo Iron Electrode AWS ENiFe-CI